How'd it happen and more reports?: Language (85) မျိုးမှ မြန်မာဘာသာ သို့ပြောင်းနည်း
Language (85) မျိုးမှ မြန်မာဘာသာ သို့ပြောင်းနည်း ... (Video)
English subtitle မှ Myanmar subtitle အဖြစ် ပြောင်းနည်း နမူနာ ..
မြန်မာဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ပြီးသား စာဖိုင်တစ်ဖိုင်ရလာအောင် ဘယ်လို translate သုံးမလဲဆိုတာကို ကျနော် နမူနာပြထားပေးပါတယ် .... အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် . ဒါကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသား တွေအတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းမြောက်စရာ သတင်းကောင်းပါ ..
Day of the mommy (2014)
အဲ့ ကားကို နမူနာအနေနဲ့ ပြောင်းပြပါ့မယ် .
နောက်ဆုံးမှာ subtitle ဆိုပြီး ထည့်ဖြည့်ပြီး googel မှာ ရှာလိုက်ပါ .
ပြီးရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့ html code တစ်ချို့ကို ဖျက်ပါမယ် . မဖျက်လည်း ရပါတယ် ...
ဖျက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် စာကြောင်း100 ကို ယူပါမယ် .. copy ကူးပြီးရင် Google chrome ထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါမယ် .
www.translate.google.com ကို သွားပြီး ဘယ်ဖက်မှာ မြန်မာစာပြောင်းမည့် စာကိုထည့်ပါ . ကြိုက်သည့် ဘာသာဖြင့်ရေးထားသည့် စာများအားလုံး ရပါတယ် .. ဘယ်ဖက်မှာ English ညာဖက်မှာ Myanmar(burmese) ကိုရွေးလိုက်ပါ ...
ပြီးရင် Translate ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. နှိပ်ပြီး ခဏစောင့်တာနဲ့ ညာဖက်အခြမ်းအကွက်အောက်မှာ ဘာသာပြန်ပြီးသားစာတွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဆိုပါစာများကို copy ပြန်ကူးရပါလိမ့်မယ် .. unicode နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်..
အားလုံးကို select ပေးဖို့အတွက်တော့ ထိပ်ဆုံးက no.1 ကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီါ်တော့ shif ကိုဖိထားရင်းဖြင့် အောက်ဆုံးက ၁၀၀ မြောက်စာကြောင်းအဆုံးကို နှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်ကျနော်တို့အနေနဲ့ unicode to zawgyi converter နဲ့ ပြန်ပြောင်းယူပါ့မယ် ..
အဲ့လင့်အတိုင်းဝင်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ အပေါ်ဆုံးက အကွက်မှာ အခုနက ဘာသာပြန်ထားပြီးသား unicode နဲ့စာတွေကို paste လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ convert ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင်တော့ zawgyi နဲ့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာ ထွက်လာပါပြီ .. notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. paste လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင်တော့ Desktop မှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ် .. သိမ်းတဲ့နေရာမှာ .txt format အစား .srt လို့ ပြန်ပြောင်းပေးပါ .. ပြီးရင် encoding type မှာ unicode ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ .. နောက်ထပ် စာကြောင်းတွေကိုတော့ဖြင့် မိမိဘာသာ ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ . မြန်မာပြည်ရဲ့ connection အနေနဲ့တော့ speed အရမ်းနှေးနေရင် နိုင်သလောက်ကိုပဲ နည်းနည်းချင်းဆီ translate လုပ်သွားလိုက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် .
Posted by Ko Nge at Monday, December 22, 2014